Shiinaha Boron Nitride warshad iyo soosaarayaasha | Kiimikada Kiimikada
Heerka fulinta: Q / YTY003-2011
Shiine magac kale: 白 石墨; 一 氮化硼
Ingiriisi magac kale: Boronnitride budada cad
1. Dhismooyinka jirka iyo kiimikada ：
1.1 Qaaciddada Molecular: BN
1.2Culeyska muruqa: 24.81 (sanadkii 1979 kii miisaanka atamka)
Qaaciddada qaabdhismeedka: 1.3
1.4 Meel dhalaalis: 3000 ℃ (xasilloon jawiga aan firfircooneyn)
1.5Mohs ′ adkaanta: 1-2
1.6 Cufnaanta: 2.29g / cm3
1.7Solubility: Biyo laguma milmi karo.
1.8Properties: Boron nitride waa budo cad, jilicsan oo jilicsan oo la mid noqon kara astaamaha garaafka wixii loo yiqiin boron mononitride. Waxay leedahay sifooyin koronto oo heer sare ah oo kuleylka kuleylka ah, kuleylka kuleylka, iska caabbinta daxalka iyo saliid wanaagga. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay caabbinta daxalka dhammaan biraha dhalaalaya. Heerkulka iska caabinta oksidheer wuxuu gaari karaa 1000 ℃, wuxuuna gaari karaa 3000 ℃ marka loo isticmaalo nitrogen iyo argon.
2. Tilmaamaha farsamada
Boodh cad oo dabacsan
3. Isticmaalka: Boron nitride waxaa si ballaaran loogu isticmaali karaa warshadaha batroolka, kiimikada, mashiinada, elektaroniga, korontada, dharka, nukliyeerka, booska iyo kuwa kale. Waxaa loo isticmaalay inay kudareyso cusbada caaga ah, insulators-ka heerka-danab sare-barta sare iyo plasma arc, walxaha adag ee wajiga isku dhafan ee semiconductor, qalabka qaab dhismeedka atomic reactor, qalabka wax lagu rakibo ee looga hortagayo shucaaca nafaqada, saliid adag, walxaha iska caabbinta iyo nuugista benzene, iwm. Isku darka Titor diboride, titanium nitride iyo boron oxide, oo lagu helo foomka cadaadiska kulul ee boron nitride iyo titanium, ayaa loo adeegsadaa inuu yahay hawo soosaarida fuuq-celinta arrimaha dabiiciga ah, iskudhiska cinjirka iyo barxadda. Heerkulka sare, waxaa loo isticmaali karaa sida qalabka gaarka ah ee elektarooliska iyo iska caabinta, iyo qufulka kululaynta wakiilka qalalan ee transistor. Waa maaddada ku jirta weelka uumiga ee aluminium. Budada ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa inay ahaato mid lagu dhasho microbead-ka dhalada, wakiilka sii deynta ee muraayadaha wax lagu shubay iyo birta.
4. Tilmaamaha nabadgelyada: Iyada oo ay ku jirto firfircoonaanta jirka ee boron nitrid, laakiin waxay ku sumoobi kartaa cunista, neefsashada, isha iyo taabashada maqaarka. Maqaarka, habka neefsashada, beerka, kilyaha iyo nidaamka wareegga dhiigga ayaa laga yaabaa inay noqdaan kuwo aan caadi ahayn liqitaanka iyo neefsashada. Xiriirka indhaha iyo maqaarka waxay sababi karaan caabuq. Qalliinka waa in lagu rakibo galoofisyo caag ah, qalabka neefsashada iyo ilaalinta indhaha iyadoo la gashanayo dharka difaaca.
5 Xidhmo: Bacda aluminium ee aluminium leh bac balaastig ah, midkiiba 1 kg.
6. Kaydinta: Ku kaydso qabow, qalalan oo hawo qaad. Nolosha shelf ee 12 bilood, haddii ay dhiciso, wali waa la isticmaalaa haddii illaa heer laga gaadho dib u tijaabinta.
7. Gaadiidka ： Ka fogow roobka, iftiinka qoraxda iyo shilalka. Ha ku dhex darin oksidheejiye xoog leh.
Hore: Warshad si toos ah Brown dareere viscous cas dareeraha Catocene - Dioctyl adipate - Tanyun Chemical
Soo saaraha alaabada Boron
Qiimaha alaabta Boron
Alaabooyinka Boron oo tayo sare leh